Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa | Teta! Septemba–Ọktoba 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụ́ ike ụmụaka n’obodo dị iche iche kwuru na kwa afọ, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ nde ụmụaka atọ na-anwụ n’ọnwa a mụrụ ha. Ha kwuru na ọtụtụ n’ime ihe ndị na-akpata ọnwụ ụmụaka ndị a bụ ihe e nwere ike igbochili. Ha kwukwara na e kee ụmụaka ndị ahụ ụzọ atọ, ihe karịrị otu ụzọ n’ime ha na-anwụ n’ụbọchị a mụrụ ha.
N’afọ 2011, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụ́ ike n’Ingland kwuru na ihe si n’anwụrụ ụgbọala na-egbu ọtụtụ ndị n’obodo iri na ise dị na Lọndọn. E kwuokwala na gas ka petrol mma n’ihi na ụgbọala anaghị aṅụ ya otú o si aṅụ petrol, ọ naghịkwa emebi ikuku otú petrol si emebi. Ma, ihe kacha emebi ikuku n’obodo ndị ahụ anyị kwuru okwu ha bụ anwụrụ si n’ụgbọala ndị e ji gas anya.
N’afọ 2013, otu ụlọ ọrụ na Rọshịa gbara ụfọdụ ndị obodo ahụ ajụjụ ọnụ. Ihe karịrị ọkara ná ndị kwuru na ha na-aga Chọọchị Ọtọdọks kwuru na ha agụtụbeghị Baịbụl. Ihe dị ka otu onye n’ime mmadụ anọ kwuru na ọ na-esi ike tupu ha ekpee ekpere.
Ụlọ Akụ̀ Ụwa kwuru na ala ndị mmadụ na-azọ n’Afrịka emeela ka ha na-ada ogbenye, meekwa ka ala e kwesịrị ịna-akọ nri tọgbọrọ nkịtị. E kee ala a na-anaghị akọ ihe ọ bụla na ha n’ụwa niile ụzọ abụọ, otu ụzọ dị n’Afrịka. Ha kwukwara na nri a na-akọpụta n’Afrịka erughị ihe ala dị n’Afrịka kwesịrị ịna-emepụta.
Ụlọ akwụkwọ dị iche iche anaghịzi eresị ụmụ akwụkwọ ha akwụkwọ ọgụgụ. Kama, ha na-etinyezi ihe niile ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịgụ n’ime obere kọmputa ha na-eresị ha. Ma, o dochabeghị anya ma kọmputa ndị ahụ hà dị ọnụ ala karịa akwụkwọ ha na-eresịbu ha.
Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Septemba–Ọktoba 2014